DOWNLOAD Prepar3D V1 mankany V2 Fix - Rikoooo
Prepar3D V1 amin'ny V2 Fix
Downloads 8 945
Ity misy programa kely noforonin'i Rikoooo izay ahafahana manamboatra ny fametrahana ny fiara rehetra nataonay tamin'ny voalohany Prepar3Dv1 mifanaraka amin'ny Prepar3D dikan-teny 2 (izany dia Fiasana).
Ity programa ity dia mahatonga ny mpikirakira tena irery hino izany Prepar3D dia mbola eo amin'ny dikan-teny 1.
Handika ny votoatin'ny fanalahidin'ny fisoratana anarana antsoina hoe "HKCUSoftwareLockheed Martin ihany izy ioPrepar3D v2 "ho" HKCUSoftwareLockheedMartinPrepar3D". Manome ny làlana marina mankany amin'ny installera Prepar3D v2.
ny P3DTsy miova ny v2. Aza mampiasa ity fanamboarana ity P3Dv1.
Tsy manana Prepar3D napetraka v1
Windows 7 na 8
Fanavaozam-baovao ho an'ny Windows Vista (KB933590)
Flight simulator X SP1 frantsay
Flight simulator X SP2 frantsay